Haiady aikido :: Tanjona ny hiakaran’ny haavo teknikan’ny mpikatroka • AoRaha
Nampiofana mpikatroka miisa dimy amby efapolo ny Sensei Alain Trendon, teny amin’ny Skate Park Antanimena, omaly. Ny fiofanana izay haharitra hatramin’ny alahady maraina ho avy izao, ao anatin’ny fahatsiarovana ny faha-50 taona nahafatesan’ny Sensei Morihei Ueshiba, mpamorona ny taranja Aikido.
“Nahafa-po ny fiofanana. Niavaka izy ity noho ny fahatongavan’i Alain Trendon, izay nahazo tso-drano avy amin’ny foiben’ny taranja, any Japon. Ny hiakaran’ny haavo teknika hitovy amin’ny sehatra iraisam-pirenena no tanjona amin’izao”, araka ny fanazan-dRakotoarisoa Lalao, filohan’ny fikambanana Sampana Fitaizana Aikido Miandrarivo (SFAM).
Hozaraina taratasy fanamamarinana ireo izay nanatrika ny fiofanana, amin’ny alahady ho avy izao. Hahazo taratasy ihany koa ireo izay nandalo fitsapana hiakarana grady.
Ampahatsiahivina fa nanaovana lanonana teny amin’ ny birao fiasan’ny masoivohon’i Japoney teny Ivandry ny fahatsiarovana ny nahafatesan’i Morihei Ueshiba, izay nanorina ny haiady Aikido tamin’ny 1930, ny alarobia lasa teo. Ny fikambanana Renwakai sy ny Sampana Fitaizana Aikido Miandrarivo (SFAM) no nikarakara ity hetsika ity miaraka amin’ny masoivohon’i Japon.
« Sambany vao nisy faha-tsiarovana ny nanorina ny taranja teto Madagasikara. Hampiray ireo mpikatroka ny taranja no tanjona amin’izao hetsika izao », araka ny fanazavan-dRakotoarisoa Lalao, hatrany. Marihina fa efa tany amin’ny taona 1960 tany no efa nisy teto Madagasikara io taranja io ka ny Seinsei Rambeloson Charles no nitondra azy.
Karate :: Hiatrika ady any Tiorkia ny mpi- katroka tanora